Kooxda hablaha kubbadda cagta Iswiidhen oo si xallad leh ku badisay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Björn Lindgren / SCANPIX.
Kooxda hablaha kubbadda cagta Iswiidhen oo si xallad leh ku badisay
La daabacay onsdag 17 juli 2013 kl 10.05
Cayaartii horyaalka kubbadda cagta ee hablaha Yurub oo shalay ku dhexmartay Iswiidhen iyo Talyaaniga magaalada Halmstad ayey kooxda Iswiidhen saddex gool dhalisay, halka uu Talyaanigu ka dhaliyey hal gool. Sidaas ayeyna Iswiidhen uga kooxdeedii kaalinta koowaad iyadoo u gudubtay isreebreebka labaad.
Waxaa hadda Iswiidhen sugaya cayaar isbreebreebka labaad oo maalinta axadda soo socota la cayaari doono. Waxaana laga yaabaa in ay Iswiidhen ku soo aaddo kooxda kaalinta saddexaad ka gasha Kooxda ama guruubka B ama C. Berri ayaa la ogaan doonaa kooxda ay Iswiidhen la cayaari doonto maalinta axadda.
Kolkii ay cayaartii shalay la soo gabagabowdey ayey tababaraha kooxda qaranka Pia Sundhage oo farxad iyo rayrayn ka muuqato ka hadashay guushii kooxda iswiidhishka:
- Waa muhiim in la sii gudbo iyadoo la isku kalsoon yahay. Waxaa kaloo muhiim ah in goolal la dhaliyo, waayo waxay kooxda gelineysaa yididiilo cusub markii ay og yihiin in ay soo guuleysteen.
Iswiidhen waxay horay u soo cayaartay laba cayaarood. Cayaartii ugu horreysey waxay iskaga hor yimaadeen kooxda Danmark, waxayna ku dhammaatay 1-1. Tii labaadna waxay isku herdiyeen kooxda Finland oo ay iswiidhishku aad uga gacansarreeyeen. Waxayna kooxdii fiinishka ku direen 5-0.